“ဒီအခွခေံတှေ သိထားရငျ သငျကိုယျတိုငျ အိမျတဈလုံးဆောကျ လို့ရပွီ” (အိမျဆောကျနညျး အခွခေံ သဘောတရားမြား) – Nyi Ma Lay
“ဒီအခွခေံတှေ သိထားရငျ သငျကိုယျတိုငျ အိမျတဈလုံးဆောကျ လို့ရပွီ” (အိမျဆောကျနညျး အခွခေံ သဘောတရားမြား)
By Nyi Ma LayPosted on October 16, 2021 October 16, 2021
မွကွေီးပုံသညျ့ အခါ တူးသညျ့ကငျြး၏ ၂ ပေ(သို့မဟုတျ) ၃ ပေ အကှာတှငျ မွကွေီးပဈပုံထားရမညျ။ မွကွေီးပွနျလညျဖို့သညျ့ အခါ တဈကွိမျလြှငျ ၆ လကျမ အလှာလိုကျ ဖို့ပွီး သိပျသညျးအောငျ ရဖွေနျးဒငျဆောငျ့ လိုအပျသညျ့ သိပျသညျးမှု့ အနအေထားရအောငျ ဆောငျရှကျပေးရမညျ။
* အဆောကျအဦးအတှကျ ပတျတနျးရိုကျသညျ့အခါ တောငျ့တငျးခိုငျမာအောငျရိုကျ၍ ပတျတနျးတိုငျအား မွအေဝငျ ၃ ပေ(သို့မဟုတျ) ၄ ပေ ဝငျအောငျရိုကျထားသငျ့ပါသညျ။
အဆောကျအဦ ကငျြတှယျဖမျးသညျ့အခါ အဆောကျအဦးတဈခု၏ သုံးခြိုးတဈခြိုးတှငျဖမျးရမညျ။ ကငျြတှယျဖမျးနညျးကို အမြိုးမြိုးဖမျးယူတတျကွသညျ။ ဥပမာ(၃၊၄၊၅) (၆၊၈၊၁၀) (၁၅ ၊ ၂၀၊ ၂၅) တို့ဖွငျ့ အမြိုးမြိုးဖမျးယူတတျကွသညျ။
* အုတျမစီခငျ အုတျကို နှဈနာရီ ကွိုတငျ၍ ရစေိမျထားရမညျ။ (သို့မဟုတျ)ရလေောငျးပေးရမညျ။
* (၇)ပေ အမွငျ့ရှိသော ၊ (၇)ပထေကျကြျောသော Slab ဆိုလြှငျ အနညျးဆုံး(၁၀)ရကျထားပွီးမှ ဖွုတျရပါမညျ။
* Slab လောငျးပွီး ( ၂ ) ရကျအတှငျး ကှနျကရဈ အစိတျအပိုငျးအပျေါ မညျသညျ့ ဝနျမြှမတငျရ။
* Slab အပွငျသို့ အဝဲထုတျသညျ့အခါ Slab ၏ အဝဲထုတျမညျ့ အတှငျးခှငျပေ၏ (၅) ဆ (၁) ဆ ထုတျခှငျ့ရှိသညျ။
လူတို့သောကျ သုံးနိုငျသောရသေညျ ကှနျကရဈလု ပျငနျး၌သုံးရနျ သငျ့တျောသညျ။ ငနျပပြ အရသာရှိေ သာရသေညျ ကှနျကရဈလုပျငနျး၌ သုံးရနျမသငျ့ေ သာရဖွေဈသညျ။ သံကူကှနျကရဈမြားအတှကျ ပငျလယျရကေို သုံးရနျမသငျ့။ အကျဆဈအနညျး ငယျပါဝငျသော သဘာဝရသေ ညျကှနျကရဈလုပျ ငနျးမြားတှငျသုံးနိုငျသောေ ရဖွဈ၏။ရေ ၌ဆာလဖိတျဓာတျ(၀. ၅)ရာခိုငျနှုနျး ပါဝငျလြှငျကှနျကရဈ ၏ဝနျခံနိုငျ အား(၄)ရာခိုငျနှု နျးကဆြငျးမညျ။ ထို့အတူရေ ၌ရိုးရိုးဆား(၅) ရာခိုငျနှု နျးပါဝငျလြှငျကှနျကရဈ၏ ဝနျခံနိုငျ အား(၃၀)ရာခိုငျနှုနျးကြ ဆငျးပမေညျ။
* အုတျစီ လုပျငနျးပွီးစီးသှား သညျ့အခါ နစေ့ဉျ တဈနလြေှ့ငျ(၃)ကွိမျ (၇)ရကျအထိ ရဖွေနျးပေးရပါသညျ။
* အုတျစီနံရံ အမွငျ့အားတ ဈနလြေှ့ငျ(၃)ပသောစီပွီးD.P.C(Damp Proof Course) ကြောကျလော ငျးထားခွငျးကပိုကော ငျးပါသညျ။
* ဝါးငွမျးမြား ဆငျသောအခါ အဆောကျအဦ အပွငျနံရံမှ (၃)ပအေကှာတှငျ တိုငျထောငျ ခိုငျးပွီး ဝါးလုံးတဈလုံးနှငျ့တဈလုံး (၂) ပခှေဲသွာ ခားခွငျးဖွငျ့ ငွမျး၏ တောငျ့တငျးခိုငျ မာမှု့ကို ရစပေါသညျ။
* သံကိုဖွတျတော ကျသညျ့အခါ (၄၅) ဒီဂရီခြိုးခြ ငျသော သံခြောငျး ကို မိမိလိုခငျြသော ပထေကျ ( ၂)လကျမ ပိုဖွတျရမညျ။ (၉၀)ဒီဂရီ ခြိုးခငျြသော သံခြောငျး ကို မိမိလိုခငျြသော ပထေကျ (၉)လကျမ ပိုဖွတျရမညျ။ (၁၃၅) ဒီဂရီ ခြိုးခငျြသော သံခြောငျး ကို မိမိလိုခငျြသော ပထေကျ(၁၄)လကျမ ပိုဖွတျပါ။(မှတျခကျြ။R.C column သံနှငျ့ Beam သံတို့အတှကျဖျောပွခွငျးဖွဈပါသညျ။)
* တံခါးရှကျမြားကို အဆော ကျအဦးတဈခုလုံး၊ အခွားလုပျင နျးမြား ပွီးစီးသညျ့နမှေ့ တပျဆငျရပါမညျ။
* အုတျရိုးနှငျ့ထိတှမေ့ညျ့ သဈသားမကျြနှာပွငျ အားလုံးကို ဆေးကတ်တရာဖွငျ့ သုတျထားရပါမညျ။
* အခနျး၏ အမွငျ့ကို မူတညျ၍ တံခါး၏ အခြိုးအစားကို တှကျယူလိုလြှငျ တံခါး၏ အမွငျ့သညျ အခနျးအမွငျ့၏ ၁/၄+၄ ပေ ၆ လကျမ ရှိရမညျ။ တံခါး၏ အကယျြသညျ တံခါး၏ အမွငျ့ထကျ (၄)ပလြေော့နညျးရမညျ။
* လှကေားပွုလုပျရာတှငျ လှကေား ထဈအရအေတှကျကို “ရာဇ” ၊ “မရဏ ” ၊ ”လာဘ” ဟူ၍ အစဉျလိုကျ မှတျယူသှားရာ ”မရဏ”ကသြညျ့ လှကေားထဈမြားကို ရှောငျကဉျြကသြညျ။ ဥပမာ – ရာဇ. ၁ ၊ ၄ ၊ ၇ ၊ ၁၀..မရဏ. ၂ ၊ ၅ ၊ ၈ ၊ ၁၁…လာဘ. ၃၊ ၆ ၊ ၉ ၊ ၁၂ အထကျပါ ” မရဏ ” လှကေားထဈ မြားဖွဈကွသော ၂ ၊ ၅ ၊ ၈၊ ၁၁ စသညျ တို့သညျ ရှောငျကဉျြရမညျ့ လှကေားထဈ အရအေတှကျ မြားဖွဈသညျဟု ဆိုလိုသညျ။ လှခေါး Landing သညျ ခွနေငျးအလြားထကျ ပိုကယျြရမညျ။
* နံရံမခြောမီ အုတျနံရံကို ရလေောငျးပါ ။ အုတျနံရံတှငျ ကြောကျထုပျမြားရှိပါက spot ရိုကျ၍ ဗွုတျထအောငျ ဘိလပျမွအေ ရညျဖြျော၍ကွိုတ ငျတဈရကျ ရိုကျထား ပါက လခေိုခွငျး ကငျးဝေးပါမညျ။ နံရံခြောပွီးသညျ့နမှေစ၍ တဈနတှေ့ငျ ခုနှဈရကျရကျ တိတိ နံရံကို ရဖွေနျးပေးရပါမညျ။
* ဆေးသုတျ သညျ့အခါ သုတျဆေးကို တဈထ ပျထကျပို၍ သုတျမညျဆိုပါက မူလသုတျဆေးကောငျးစှာခွောကျမှ နောကျတ ဈထပျကို သုတျရပါမညျ။ သုတျဆေးကို အသုံးမပွုသေးပါက လေ လုံအောငျ ပိတျထား ရပါမညျ။ ရောစပျပွီး မှထေားသော သုတျဆေး တို့ကို တဈဝကျတဈပကျြ အသုံးပွုပွီးဖွဈလြှငျ ပုံးထဲတှငျ ကနျြရှိနသေညျ့ သုတျဆေးအပျေါမှ ရဖွေညျ့ထားရပါမညျ။
မွကွေီးကငျြးထဲသို့ concrete မလောငျးမီ Level ပေး၍ မကျြနှာ ပွငျညီအောငျ ညှိပေးရမညျ။ Concrete လောငျးရာတှငျ သုံးပထေကျမွငျ့သော အမွငျ့မှ တိုကျရိုကျလောငျးမခပြဲ ၎င်းငျးထကျနှိမျ့ခြ၍လောငျးခွငျးက ပိုမိုကောငျးပါသညျ။
Concrete လောငျးခြိနျ vibrator အသုံးပွုရာတှငျ rod တံကို တညျ့မတျစှာထိုးရပါမညျ။ Rod တံကိုပွနျထုတျသညျ့အခါ Rod တံထိုးသညျ့နရော သို့ကှနျကရ ဈအစားဝငျနို ငျရနျေသတွိ ပုရမညျ။ Rod တံထိုးထညျ့ ထားရမညျ့ အခြိနျမှာတဈနရော လြှငျအန ညျးဆုံး(၁၅)စက်ကနျ့ မှအမြားဆုံး(၂၅)စက်ကနျ့ထကျမကြျောစရေ။ Rod တံကိုအခြိနျကွာကွာ ထိုးစိုကျထားလြှငျကှနျ ကရဈမြားတဈနေ ရာထဲတှငျမာခွ ငျးဖွဈတ တျသညျကိုသတိပွုရမညျ။Rod တံကိုကိုငျတှ ယျအသုံးပွုသူသညျအေ တှ့အကွုံရှိပွီးကြှ မျးကငျြနား လညျသူဖွဈရ မညျ။
ကှနျကရဈလောငျးပွီးသ ညျ့အခါအမွဲတမျး စိုစှတျနေေ စရနျရကေို အနညျးဆုံး တဈနသေုံ့းကွိမျေ လာငျးပေး သငျ့ပါသညျ။ေ ရကနျငယျပွုလုပျပွေး ခငျး၊စိုစှတျေ သာအရာဝတ်ထွု ဖငျ့ကာရံဖုံး အုပျထားခွငျး တို့ဖွဈပါသညျ။
*သံခြောငျးဆ ကျရာတှငျ အခငျြး၏ေ လးဆယျဆ (40D)အနညျးဆုံး ရှိရပါမညျ ။သံခြောငျး မြားအသုံးပွုသညျ့အ ခါသံခြေးမြား ၊အမဲဆီမြား၊မွကွေီး မြား၊ဆီမြား ကငျးစငျစရေနျ လိုအပျပါ သညျ။ Concrete RC Column တိုငျလောငျးရာတှငျတဈနေ့(12′) အမွငျ့ထိသာ လောငျးသငျ့ပါသညျ။
*အမိုးသှပျမိုးသညျ့ အခါတဈခပျြနှငျ့တဈခြ ပျထပျသညျ့သှပျ ကိုနှဈတှနျ့ တိတိထ ပျစရေမညျ။သှပျထိပျခွငျးဆကျ သညျ့အခါအနညျး ဆုံး ခွောကျလကျ မထ ပျသငျ့ပါသညျ။
*Concrete 1m^3လြှငျ 35.32ft^3 ရှိပါသညျ။
* ရကေိုဂါလံတှကျသညျ့အခါ အလြှား× အနံ × အမွငျ့ ×6.25နှငျ့မွောကျ လြှငျ့ရဂေါလံ ရရှိပါမညျ။ရေ ကိုလီတာဖွငျ့တှကျသ ညျ့အခါ အလြား×အနံ×အမွငျ့=ရလာတဲ့ အဖွကေို 4.54နှငျ့မွှောကျရပါမညျ။
*(8″×8″)ကွှပွေားတဈကငျြးလြှငျ 225 ခပျြ…(8″×12″)ကွှပွေားတဈကငျြးလြှငျ 150 ခပျြ…(12″×12″)ကွှပွေား တဈကငျြးလြှငျ 100 ခပျြ…(1 ‘×2’)ကွှပွေား တဈကငျြးလြှငျ 50 ခပျြ…(2 ‘×2 ‘)ကွှပွေားတဈကငျြးလြှငျ25ခပျြ
*သဈတဈ တနျတှငျရှိရမညျ့ အတိုငျး အတာမြား
(12″×1″)=600’…(11″×1″)=655’…(10″×1″)=720’…(9″×1″)=800’…(8″×1″)=900’…(7″×1″)=1029’…(6″×1″)=1200’…(5″×1″)=1440’…(4″×1″)=1800’…(3″×1″)=2400’…(2″×1″)=3600’…(1″×1″)=7200’…(2″×1-1/2″)=7200 ‘…(3″×1-1/2″)=1600 ‘…(6″×6″)=200 ‘…( 3″×3″)=800 ‘…(3″×2″)=1200 ‘…(4″×4″)=450 ‘
(4″×2″)=900 ‘…(4″×1-1/2″)=1200 ‘…(5″×5″)=288 ‘…(5″×3″)=480 ‘…(5″×2″)=720 ‘…(6″×2″)=600 ‘ …(6″×1-1/2″)=2400 ‘
1 Ton တှငျရှိသော သံခြောငျးအရအေတှကျမြား
တဈခြောငျးလြှငျ 12mm=40ft…6.5mm=0.26kg/m … 1ton=3834m …1 viss = 20.22=20′-3″ ..8mm=0.395kg/m …1ton=2531m …1 viss = 13.35=13′-4″ …10mm=135 ခြောငျး …12mm=88 ခြောငျး …16mm=53 ခြောငျး …18mm=41 ခြောငျး …20mm=33 ခြောငျး …22mm=27 ခြောငျး …25mm=21 ခြောငျး …1m=3.28ft …1 inch=25.4mm …1m^3=35.32ft^3
Water 1ft^3=62.4 lb …Water 1ft^3=624 Gal …Water 1 Gal=10lb …Water 1 Gal=4.54 Liter
1 Ton = 2240 Lb …1 Acre-ft=1234m^3 …1 Acre=0.405 hectares …1 meter= 3.281 feet …1 km= 0.621 Mile …1 sq mile =2.59 sq km
တဈဧကလြှငျ 208.71 ft ပတျလညျရှိသညျ။ တဈဧက=43560 စတုရနျးပေ ဘိလပျမွတေဈအိတျလြှငျ 50kg လေးပါသညျ။ တဈတနျလြှငျ 1000 kg ဘိလပျမွေ 20 အိတျလြှငျ တဈတနျရှိပါသညျ။
Sand(သဲ)၊ Sand coarse(သဲကွမျး)၊ Sand fine(သဲ နု)၊ Gravel(ကြောကျစရဈ)၊ Cement(ဘိလပျမွေ)၊ Water(ရေ)၊ Brick(အုတျ)၊ Brickwork (အုတျစီခွငျး)၊ Plastering work(နံရံခြောခွငျး)၊ Stair plastering work (လှခေါးခြောခွငျး)၊ Bamboo( ဝါးလုံး)၊
Earth(soil)မွတေူး၊ Plywood(အထပျသားပွား)၊ Dig earth(soil)မွကွေီးတူး၊ Earth (soil) compaction construction(မွကွေီးကွိတျခွငျး)၊ Earth(soil) leveling construction(မွကွေီးညှိခွငျး)၊ Water pump(ရစေုပျစကျ)၊ Backhoes(မွတေူး၊မွကေုတျကား)၊
Construction roller(မွကွေိတျစကျ)၊ Plate compactor(မွရေိုကျစကျ)၊ Shrine room(ဘုရားခနျး)၊ Living room(ဧညျ့ခနျး)၊ Single bed room (တဈယောကျအိပျခနျး)၊ Master bed room(မိသားစုအိပျခနျး)၊ Kitchen room(မီးဖိုခနျး)၊ Dining room(ထမငျးစားခနျး)၊
Bath room( ရခြေိုးခနျး)၊ Toilet(အိမျသာခနျး) Common toilet(အမြားသုံးအိမျသာခနျး)၊ Lounge room(sitting) အပနျးဖွခေနျး၊ Basement (cellar)မွအေောကျခနျး၊ Study room(စာကွညျ့ခနျး)၊ Roof (အမိုး)၊ Lighting rod(မိုးကွိုးလှဲ)၊ Gutter(ရတေလြောကျ)၊
Attic(ထပျခိုး)၊ Gable(မွငျးမိုရျပိတျ)၊ Water Tank(ရလှေောငျကနျ)၊ Ceiling(မကျြနှာကကျြ)၊ Balcony(လသာဆောငျ)၊ Verandah(ဝရံတာ)၊ Windows(ပွတငျးပေါကျမြား)၊ Doors(တံ ခါးမြား)၊ Ventilator(လဝေငျလထှေကျပေါကျ)၊ Portico(အိမျရှပေ့ျေါတီကို)၊
Staircase/stairs(လှခေါးမြား)၊ Gate(ဝငျးတံခါး)၊ Fence(ခွံစညျးရိုး)၊ Garden home(ဥယြာဉျ)၊ Letter box(အိမျရှစေ့ာတိုကျပုံး)၊ Door bell(အိမျရှအေ့ခကျြပေးဘဲလျ)၊ Drain(ရမွေောငျး)၊
မှတျခကျြ။ မှားတာရှိရငျ လှဲတာရှိရငျ ပွငျလိုကျပါခငျဗြာ😊 Credit *
“ဒီအခြေခံတွေ သိထားရင် သင်ကိုယ်တိုင် အိမ်တစ်လုံးဆောက် လို့ရပြီ” (အိမ်ဆောက်နည်း အခြေခံ သဘောတရားများ)
မြေကြီးပုံသည့် အခါ တူးသည့်ကျင်း၏ ၂ ပေ(သို့မဟုတ်) ၃ ပေ အကွာတွင် မြေကြီးပစ်ပုံထားရမည်။ မြေကြီးပြန်လည်ဖို့သည့် အခါ တစ်ကြိမ်လျှင် ၆ လက်မ အလွှာလိုက် ဖို့ပြီး သိပ်သည်းအောင် ရေဖြန်းဒင်ဆောင့် လိုအပ်သည့် သိပ်သည်းမှု့ အနေအထားရအောင် ဆောင်ရွက်ပေးရမည်။
* အဆောက်အဦးအတွက် ပတ်တန်းရိုက်သည့်အခါ တောင့်တင်းခိုင်မာအောင်ရိုက်၍ ပတ်တန်းတိုင်အား မြေအဝင် ၃ ပေ(သို့မဟုတ်) ၄ ပေ ဝင်အောင်ရိုက်ထားသင့်ပါသည်။
အဆောက်အဦ ကျင်တွယ်ဖမ်းသည့်အခါ အဆောက်အဦးတစ်ခု၏ သုံးချိုးတစ်ချိုးတွင်ဖမ်းရမည်။ ကျင်တွယ်ဖမ်းနည်းကို အမျိုးမျိုးဖမ်းယူတတ်ကြသည်။ ဥပမာ(၃၊၄၊၅) (၆၊၈၊၁၀) (၁၅ ၊ ၂၀၊ ၂၅) တို့ဖြင့် အမျိုးမျိုးဖမ်းယူတတ်ကြသည်။
* အုတ်မစီခင် အုတ်ကို နှစ်နာရီ ကြိုတင်၍ ရေစိမ်ထားရမည်။ (သို့မဟုတ်)ရေလောင်းပေးရမည်။
* (၇)ပေ အမြင့်ရှိသော ၊ (၇)ပေထက်ကျော်သော Slab ဆိုလျှင် အနည်းဆုံး(၁၀)ရက်ထားပြီးမှ ဖြုတ်ရပါမည်။
* Slab လောင်းပြီး ( ၂ ) ရက်အတွင်း ကွန်ကရစ် အစိတ်အပိုင်းအပေါ် မည်သည့် ဝန်မျှမတင်ရ။
* Slab အပြင်သို့ အဝဲထုတ်သည့်အခါ Slab ၏ အဝဲထုတ်မည့် အတွင်းခွင်ပေ၏ (၅) ဆ (၁) ဆ ထုတ်ခွင့်ရှိသည်။
လူတို့သောက် သုံးနိုင်သောရေသည် ကွန်ကရစ်လု ပ်ငန်း၌သုံးရန် သင့်တော်သည်။ ငန်ပျပျ အရသာရှိေ သာရေသည် ကွန်ကရစ်လုပ်ငန်း၌ သုံးရန်မသင့်ေ သာရေဖြစ်သည်။ သံကူကွန်ကရစ်များအတွက် ပင်လယ်ရေကို သုံးရန်မသင့်။ အက်ဆစ်အနည်း ငယ်ပါဝင်သော သဘာဝရေသ ည်ကွန်ကရစ်လုပ် ငန်းများတွင်သုံးနိုင်သောေ ရဖြစ်၏။ရေ ၌ဆာလဖိတ်ဓာတ်(၀. ၅)ရာခိုင်နှုန်း ပါဝင်လျှင်ကွန်ကရစ် ၏ဝန်ခံနိုင် အား(၄)ရာခိုင်နှု န်းကျဆင်းမည်။ ထို့အတူရေ ၌ရိုးရိုးဆား(၅) ရာခိုင်နှု န်းပါဝင်လျှင်ကွန်ကရစ်၏ ဝန်ခံနိုင် အား(၃၀)ရာခိုင်နှုန်းကျ ဆင်းပေမည်။
* အုတ်စီ လုပ်ငန်းပြီးစီးသွား သည့်အခါ နေ့စဉ် တစ်နေ့လျှင်(၃)ကြိမ် (၇)ရက်အထိ ရေဖြန်းပေးရပါသည်။
* အုတ်စီနံရံ အမြင့်အားတ စ်နေ့လျှင်(၃)ပေသာစီပြီးD.P.C(Damp Proof Course) ကျောက်လော င်းထားခြင်းကပိုကော င်းပါသည်။
* ဝါးငြမ်းများ ဆင်သောအခါ အဆောက်အဦ အပြင်နံရံမှ (၃)ပေအကွာတွင် တိုင်ထောင် ခိုင်းပြီး ဝါးလုံးတစ်လုံးနှင့်တစ်လုံး (၂) ပေခွဲသြာ ခားခြင်းဖြင့် ငြမ်း၏ တောင့်တင်းခိုင် မာမှု့ကို ရစေပါသည်။
* သံကိုဖြတ်တော က်သည့်အခါ (၄၅) ဒီဂရီချိုးချ င်သော သံချောင်း ကို မိမိလိုချင်သော ပေထက် ( ၂)လက်မ ပိုဖြတ်ရမည်။ (၉၀)ဒီဂရီ ချိုးချင်သော သံချောင်း ကို မိမိလိုချင်သော ပေထက် (၉)လက်မ ပိုဖြတ်ရမည်။ (၁၃၅) ဒီဂရီ ချိုးချင်သော သံချောင်း ကို မိမိလိုချင်သော ပေထက်(၁၄)လက်မ ပိုဖြတ်ပါ။(မှတ်ချက်။R.C column သံနှင့် Beam သံတို့အတွက်ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။)
* တံခါးရွက်များကို အဆော က်အဦးတစ်ခုလုံး၊ အခြားလုပ်င န်းများ ပြီးစီးသည့်နေ့မှ တပ်ဆင်ရပါမည်။
* အုတ်ရိုးနှင့်ထိတွေ့မည့် သစ်သားမျက်နှာပြင် အားလုံးကို ဆေးကတ္တရာဖြင့် သုတ်ထားရပါမည်။
* အခန်း၏ အမြင့်ကို မူတည်၍ တံခါး၏ အချိုးအစားကို တွက်ယူလိုလျှင် တံခါး၏ အမြင့်သည် အခန်းအမြင့်၏ ၁/၄+၄ ပေ ၆ လက်မ ရှိရမည်။ တံခါး၏ အကျယ်သည် တံခါး၏ အမြင့်ထက် (၄)ပေလျော့နည်းရမည်။
* လှေကားပြုလုပ်ရာတွင် လှေကား ထစ်အရေအတွက်ကို “ရာဇ” ၊ “မရဏ ” ၊ ”လာဘ” ဟူ၍ အစဉ်လိုက် မှတ်ယူသွားရာ ”မရဏ”ကျသည့် လှေကားထစ်များကို ရှောင်ကျဉ်ကျသည်။ ဥပမာ – ရာဇ. ၁ ၊ ၄ ၊ ၇ ၊ ၁၀..မရဏ. ၂ ၊ ၅ ၊ ၈ ၊ ၁၁…လာဘ. ၃၊ ၆ ၊ ၉ ၊ ၁၂ အထက်ပါ ” မရဏ ” လှေကားထစ် များဖြစ်ကြသော ၂ ၊ ၅ ၊ ၈၊ ၁၁ စသည် တို့သည် ရှောင်ကျဉ်ရမည့် လှေကားထစ် အရေအတွက် များဖြစ်သည်ဟု ဆိုလိုသည်။ လှေခါး Landing သည် ခြေနင်းအလျားထက် ပိုကျယ်ရမည်။
* နံရံမချောမီ အုတ်နံရံကို ရေလောင်းပါ ။ အုတ်နံရံတွင် ကျောက်ထုပ်များရှိပါက spot ရိုက်၍ ဗြုတ်ထအောင် ဘိလပ်မြေအ ရည်ဖျော်၍ကြိုတ င်တစ်ရက် ရိုက်ထား ပါက လေခိုခြင်း ကင်းဝေးပါမည်။ နံရံချောပြီးသည့်နေမှစ၍ တစ်နေ့တွင် ခုနှစ်ရက်ရက် တိတိ နံရံကို ရေဖြန်းပေးရပါမည်။
* ဆေးသုတ် သည့်အခါ သုတ်ဆေးကို တစ်ထ ပ်ထက်ပို၍ သုတ်မည်ဆိုပါက မူလသုတ်ဆေးကောင်းစွာခြောက်မှ နောက်တ စ်ထပ်ကို သုတ်ရပါမည်။ သုတ်ဆေးကို အသုံးမပြုသေးပါက လေ လုံအောင် ပိတ်ထား ရပါမည်။ ရောစပ်ပြီး မွှေထားသော သုတ်ဆေး တို့ကို တစ်ဝက်တစ်ပျက် အသုံးပြုပြီးဖြစ်လျှင် ပုံးထဲတွင် ကျန်ရှိနေသည့် သုတ်ဆေးအပေါ်မှ ရေဖြည့်ထားရပါမည်။
မြေကြီးကျင်းထဲသို့ concrete မလောင်းမီ Level ပေး၍ မျက်နှာ ပြင်ညီအောင် ညှိပေးရမည်။ Concrete လောင်းရာတွင် သုံးပေထက်မြင့်သော အမြင့်မှ တိုက်ရိုက်လောင်းမချပဲ ၎င်းထက်နှိမ့်ချ၍လောင်းခြင်းက ပိုမိုကောင်းပါသည်။
Concrete လောင်းချိန် vibrator အသုံးပြုရာတွင် rod တံကို တည့်မတ်စွာထိုးရပါမည်။ Rod တံကိုပြန်ထုတ်သည့်အခါ Rod တံထိုးသည့်နေရာ သို့ကွန်ကရ စ်အစားဝင်နို င်ရေန်သတြိ ပုရမည်။ Rod တံထိုးထည့် ထားရမည့် အချိန်မှာတစ်နေရာ လျှင်အန ည်းဆုံး(၁၅)စက္ကန့် မှအများဆုံး(၂၅)စက္ကန့်ထက်မကျော်စေရ။ Rod တံကိုအချိန်ကြာကြာ ထိုးစိုက်ထားလျှင်ကွန် ကရစ်များတစ်နေ ရာထဲတွင်မာခြ င်းဖြစ်တ တ်သည်ကိုသတိပြုရမည်။Rod တံကိုကိုင်တွ ယ်အသုံးပြုသူသည်အေ တွ့အကြုံရှိပြီးကျွ မ်းကျင်နား လည်သူဖြစ်ရ မည်။
ကွန်ကရစ်လောင်းပြီးသ ည့်အခါအမြဲတမ်း စိုစွတ်နေေ စရန်ရေကို အနည်းဆုံး တစ်နေ့သုံးကြိမ်ေ လာင်းပေး သင့်ပါသည်။ေ ရကန်ငယ်ပြုလုပ်ပြေး ခင်း၊စိုစွတ်ေ သာအရာဝတ္ထြု ဖင့်ကာရံဖုံး အုပ်ထားခြင်း တို့ဖြစ်ပါသည်။
*သံချောင်းဆ က်ရာတွင် အချင်း၏ေ လးဆယ်ဆ (40D)အနည်းဆုံး ရှိရပါမည် ။သံချောင်း များအသုံးပြုသည့်အ ခါသံချေးများ ၊အမဲဆီများ၊မြေကြီး များ၊ဆီများ ကင်းစင်စေရန် လိုအပ်ပါ သည်။ Concrete RC Column တိုင်လောင်းရာတွင်တစ်နေ့(12’) အမြင့်ထိသာ လောင်းသင့်ပါသည်။
*အမိုးသွပ်မိုးသည့် အခါတစ်ချပ်နှင့်တစ်ချ ပ်ထပ်သည့်သွပ် ကိုနှစ်တွန့် တိတိထ ပ်စေရမည်။သွပ်ထိပ်ခြင်းဆက် သည့်အခါအနည်း ဆုံး ခြောက်လက် မထ ပ်သင့်ပါသည်။
*Concrete 1m^3လျှင် 35.32ft^3 ရှိပါသည်။
* ရေကိုဂါလံတွက်သည့်အခါ အလျှား× အနံ × အမြင့် ×6.25နှင့်မြောက် လျှင့်ရေဂါလံ ရရှိပါမည်။ရေ ကိုလီတာဖြင့်တွက်သ ည့်အခါ အလျား×အနံ×အမြင့်=ရလာတဲ့ အဖြေကို 4.54နှင့်မြှောက်ရပါမည်။
*(8″×8″)ကြွေပြားတစ်ကျင်းလျှင် 225 ချပ်…(8″×12″)ကြွေပြားတစ်ကျင်းလျှင် 150 ချပ်…(12″×12″)ကြွေပြား တစ်ကျင်းလျှင် 100 ချပ်…(1 ‘×2’)ကြွေပြား တစ်ကျင်းလျှင် 50 ချပ်…(2 ‘×2 ‘)ကြွေပြားတစ်ကျင်းလျှင်25ချပ်
*သစ်တစ် တန်တွင်ရှိရမည့် အတိုင်း အတာများ
1 Ton တွင်ရှိသော သံချောင်းအရေအတွက်များ
တစ်ချောင်းလျှင် 12mm=40ft…6.5mm=0.26kg/m … 1ton=3834m …1 viss = 20.22=20′-3″ ..8mm=0.395kg/m …1ton=2531m …1 viss = 13.35=13’-4″ …10mm=135 ချောင်း …12mm=88 ချောင်း …16mm=53 ချောင်း …18mm=41 ချောင်း …20mm=33 ချောင်း …22mm=27 ချောင်း …25mm=21 ချောင်း …1m=3.28ft …1 inch=25.4mm …1m^3=35.32ft^3
တစ်ဧကလျှင် 208.71 ft ပတ်လည်ရှိသည်။ တစ်ဧက=43560 စတုရန်းပေ ဘိလပ်မြေတစ်အိတ်လျှင် 50kg လေးပါသည်။ တစ်တန်လျှင် 1000 kg ဘိလပ်မြေ 20 အိတ်လျှင် တစ်တန်ရှိပါသည်။
Sand(သဲ)၊ Sand coarse(သဲကြမ်း)၊ Sand fine(သဲ နု)၊ Gravel(ကျောက်စရစ်)၊ Cement(ဘိလပ်မြေ)၊ Water(ရေ)၊ Brick(အုတ်)၊ Brickwork (အုတ်စီခြင်း)၊ Plastering work(နံရံချောခြင်း)၊ Stair plastering work (လှေခါးချောခြင်း)၊ Bamboo( ဝါးလုံး)၊
Earth(soil)မြေတူး၊ Plywood(အထပ်သားပြား)၊ Dig earth(soil)မြေကြီးတူး၊ Earth (soil) compaction construction(မြေကြီးကြိတ်ခြင်း)၊ Earth(soil) leveling construction(မြေကြီးညှိခြင်း)၊ Water pump(ရေစုပ်စက်)၊ Backhoes(မြေတူး၊မြေကုတ်ကား)၊
Construction roller(မြေကြိတ်စက်)၊ Plate compactor(မြေရိုက်စက်)၊ Shrine room(ဘုရားခန်း)၊ Living room(ဧည့်ခန်း)၊ Single bed room (တစ်ယောက်အိပ်ခန်း)၊ Master bed room(မိသားစုအိပ်ခန်း)၊ Kitchen room(မီးဖိုခန်း)၊ Dining room(ထမင်းစားခန်း)၊
Bath room( ရေချိုးခန်း)၊ Toilet(အိမ်သာခန်း) Common toilet(အများသုံးအိမ်သာခန်း)၊ Lounge room(sitting) အပန်းဖြေခန်း၊ Basement (cellar)မြေအောက်ခန်း၊ Study room(စာကြည့်ခန်း)၊ Roof (အမိုး)၊ Lighting rod(မိုးကြိုးလွှဲ)၊ Gutter(ရေတလျောက်)၊
Attic(ထပ်ခိုး)၊ Gable(မြင်းမိုရ်ပိတ်)၊ Water Tank(ရေလှောင်ကန်)၊ Ceiling(မျက်နှာကျက်)၊ Balcony(လသာဆောင်)၊ Verandah(ဝရံတာ)၊ Windows(ပြတင်းပေါက်များ)၊ Doors(တံ ခါးများ)၊ Ventilator(လေဝင်လေထွက်ပေါက်)၊ Portico(အိမ်ရှေ့ပေါ်တီကို)၊
Staircase/stairs(လှေခါးများ)၊ Gate(ဝင်းတံခါး)၊ Fence(ခြံစည်းရိုး)၊ Garden home(ဥယျာဉ်)၊ Letter box(အိမ်ရှေ့စာတိုက်ပုံး)၊ Door bell(အိမ်ရှေ့အချက်ပေးဘဲလ်)၊ Drain(ရေမြောင်း)၊
မှတ်ချက်။ မှားတာရှိရင် လွဲတာရှိရင် ပြင်လိုက်ပါခင်ဗျာ😊 Credit *
Previous post ကဲ…….. ပိုကျဆံခြေးကွသူမြား မှတျသားရနျ …
Next post မွနျမာလူမြိုးတှေ အရမျးကွိုကျကွတဲ့ ဒညငျးသီးရဲ့ ရာဇဝငျ